Inona no Lazain’ireo Bilaogera Salvadoriana — Fanalan-jaza sy Mariazin’ny Pelaka · Global Voices teny Malagasy
Inona no Lazain'ireo Bilaogera Salvadoriana — Fanalan-jaza sy Mariazin'ny Pelaka
Voadika ny 19 Septambra 2017 14:18 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Aprily taona 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Maro ireo olana noresahana tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Salvadoriana nandritra ny herinandro lasa. Adihevitra be no natao mikasika ny lahatsoratr'i Jack Hitt tamin'ny 9 Aprily 2006 izay nomen'ny Gazetiboky Sunday New York Times lohateny hoe Pro-Life Nation (Firenena Mpiaro Aina). Ao amin'ny lahatsoratra, mamaritra ny fanamelohana feno ny fanalan-jaza ao El Salvador i Hitt, izay ahitana fanenjehana sy fanagadrana vehivavy manala zaza, ary tsy misy fanavahana ny mikasika ny fanolanana, firaisana amin'olom-pady na fahasalaman'ny reny. Niteraka adihevitra ara-panahy tao amin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny bilaogy El Salvador an'i Tim ny lahatsoratra ka nisy ireo nankalaza ny politika ny governemanta “mpiaro aina” sy ny hafa nanameloka ny hevitra fa azo heverina ho mpiaro aina ny governemanta izay tsy mamaha ny fahantrana sy ny aretina mpahazo ny ankizy.
Mandritra izany fotoana izany, blaogy liberaly maro no naneho hevitra momba ny Firenena Mpiaro Aina tamin'ny alalan'ny faminavinàna fa izany no hoavin'ny lalàna ny fanalan-jaza any Etazonia raha nanana ny lalany ireo vondrona kaonservativa Amerikana. Santionany amin'ireo bilaogy liberaly ny lahatsoratra bilaogy tahaka ny nahita ny ho avy aho ary i El Salvador izany tao amin'ny Tatitra Carpetbagger na koa ny lahatsoratra ao amin'ny Vox Mia.
Ny olana ara-tsosialy mafana manaraka dia ny fanambadian'ny olon-droa mitovy taovam-pananahana. Nisy ny tolo-kevitra hanitsiana ny lalàmpanorenana ao El Salvador mba handraràna ny mety hisian'izany. Jjmar ao amin'ny bilaogy Hunnapuh niantso ny tolo-kevitra ho fanakona-maso. Milaza ny faharavan'ny fianakaviana ao El Salvador sy ny habetsaky tokantrano tarihan'ny renim-pianakaviana tokan-tena ho olana lehibe mitarika mankany amin'ny fiforonan'ny andian-jiolahy sy ny fahantrana kosa i Jimar, kanefa ny fifantohana be loatra amin'ny fanitsiana lalampanorenana dia toa te-hilaza fa loharanon'ny olan'ny firenena ny firaisan'ny pelaka.
Ny fanitsiana ny lalàna momba ny fanambadian'ny olon-droa mitovy taovam-pananahana dia iray amin'ireo fanitsiana maromaro natolotra amin'ny lalàm-panorenana mandritra ny ora maro amin'ny fivoriana ankehitriny ataon'ny Antenimieram-pirenena Salvadoriana izay mifarana amin'ny misasak'alina amin'ny 30 Aprily. Maro amin'ireo depiote amin'izao fotoana izao no tsy hanana asa intsony aorian'io satria handray ny sezany amin'ny 1 Mey ireo solombavambahoaka voafidy tamin'ny fifidianana tamin'ny 12 martsa. Mba hahombiazana, tsy maintsy atao amin'ny fivoriana roa manaraka ao amin'ny Antenimieram-Pirenena ny fanitsiana lalàm-panorenana. Nilaza i Jjmar ao amin'ny Hunnapuh fa ny fanitsiana lalàm-panorenana dia tokony laniana amin'ny fifidianana atao ny 30 aprily ary avy eo latsa-bato iray hafa amin'ny 1 May miaraka amin'ny mpanao lalàna vaovao. Ny dingana toy izany, hoy ilay bilaogera dia mety hiteraka ohatra ratsy, mampiseho fa azo havaozina tsy misy fandinihana firy ny lalàna fototra ao amin'ny firenena. Ny tsikera lehibe kokoa, iombonan'ireo bilaogera El Visitador sy Tim hevitra, dia natao tsy nilaina mpifidy ny fanitsiana lalampanorenana tamin'ny 12 Martsa.
Tamin'ny bilaogy hafa, nanome famintinana tsy tapaka amin'ny teny anglisy mikasika ny vaovao avy amin'ny gazety Salvadoriana tao amin'ny bilaoginy i Chuck Stewart. Mandritra izany, mpikatroka tontolo iainana mpitaingina bisikileta avy ao California mankany amin'ny tendro atsimon'i Amerika i David Kroodsma mba hanaitra ny saina mikasika ny olan'ny fikorontanan'ny toetrandro. Amin'ity herinandro ity, manoritsoritra ny fitsidihany manerana an'i El Salvador mandritra ny herinandro izy, niara-nipetraka tamin'ireo mpamono afo sy miresaka any an-tsekoly ny bilaoginy.
Ao amin'ny andian-dahatsoratra, mandinika ny dikan'ny “Maha-Salvadorianina” ho an'ny Latina mizaka zom-pirenena Etazonia i Claudia Milian. Milaza i Milian fa tsy manana embona nasionalista izay ataon'ny monina ao El Salvadaoro hoe “guanacos” tsy maintsy ananan'ny monina any ivelan'ny firenena izy.